प्रचण्ड भन्छन्- बिहिबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउँछ, को को होलान मन्त्री ! - Dainikee News::Fastest news portal nepal, news from nepal
प्रचण्ड भन्छन्- बिहिबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउँछ, को को होलान मन्त्री !
काठमाडौं, फागुन २९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वरमा मंगलवार राष्ट्रपति पदका लागि मतदानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सरकार विस्तार बारेमा छलफल जारी रहेको र बिहिबारसम्म पूर्णता पाउने बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकार विस्तारका सन्दर्भमा छलफल जारी छ। एक दुई दिनमै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ।’
यसअघि मधेस केन्द्रीत दललाई सरकारमा ल्याउनको लागि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता नदिएको प्रचण्डले संकेत गरे । संघीय समाजवादी फोरमले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भइसकेको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दिने मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन । राजपा र फोरमले उपराष्ट्रपति र उपसभामुखको पनि माग गरेपछि छलफल लम्बिएको प्रचण्डले जानकारी दिए ।
आगामी मन्त्रीपरिषद्मा कसकसलाई लैजाने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र कुरा मिल्न सकेको छैन । यसअघि चर्चामा आएका माओवादीका बिना मगर, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी हुन् । माओवादीको भागमा परेको ७ मन्त्रालयमध्ये गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा बादल र मातृका मन्त्री भइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मङ्लबार, फाल्गुन २९, २०७४ /Tuesday, March 13th, 2018, 3:34 pm
धनुषा मालपाेतमा भूमिसुधार मन्त्रीको निरीक्षण
हालसम्म १४ वाणिज्य बैंकहरुको लाभांश घोषणा, सबै भन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कम सिटिजन्स बैंक